Jajjaboo - Wikipedia
Waantoonni jajjaboo ta'an kan beekkamaniin walitti-qabamu fi jijjirama baayyinaa(volume) diduun. Xiqqeessanii (akka maayikiroskooppii jalatti) yoo ilaalanii, jajjaboon amala (property) sadii qaba:
Atamoonni yokan molokiyuulonni jajjaboo keessatti argaman baayyee walitti qabamanii argamu.
Waanen jajjaboo keessatti argaman bakka ta'eet akkataa ta'een walitti qabatanii ademuu. Kunis jabenya jajjaboof sababa ta'a. Qorannoo albuudotaa fi crystallograpy keessatti, fakkin (structure) kiriistaalii(crystal) tokko akkata walitti qabamu atamii kiriistaalii(crystal) sunii irratti hunda'a. Fakkiin kiriistaalii(crystal) kutaa xixiqqaa fi atamotta akkataa ta'een walitti qabaman of keessaa qaba, teesson isaanis irra dedebi'aa 3Diin adeema. Bakki duwwaan kutaalee kiriistaalii(crystal) jiduu jiruu kan karaa hundumaan argamu lattice parameters jedhamee beekkama. Amalli (property)iin teesso qixee kiriistaalii(crystal) fuula keessa kiriistaalii(crystal) walitti qabama. Fakkii (structure) fi akkata (property) tesson kiriistaalii(crystal) amalla (property) crystalla kan akka cleavage, electronic band structure fi optical properties hundessa.
Yoo humni ga'a ta'ee irratti gadhifame, amalli lameen kunii caccacabu danda'u, kunis akka tesoon crystal sunii hamatuu tasisaa.
Waan jajjaboo hundi anniisaa hoo'aa(thermal energy) hanga ta'ee of keessaa qabuf, atamiin isaani ni chocho'a. Haa ta'u malee, sochiin kuni xiqqaa fi baayyee jarjaraadha, kanafuu sochiin kunii akkataa hundatti ilalamuus bekamuus hin danda'u.
Dameen fiiziksii kan waa'ee jajjabootaa qoratu soolid isteet fiiziksi (solid-state physics) jedhama.
Jajjaboon baayyee salphaa ta'e jajjaboo nam-tolchee yoo ta'u maqaansaa eeroojeel(aerogel) jedhama. Rukkinni eeroojeelii isa salphaa 1.9 mg/cm3 ykn 1.9 kg/m3 (rukkina bishaanii 1/530 ta'a).
Jireenya keenya keessatti guyyaa guyyaadhaan jajjaaboo nu qunnama. Fakkenya jajjaboo keessaa kan akk cabbii, muka, pilaastikii fi kkf kaasun ni danda'ama.
"https://om.wikipedia.org/w/index.php?title=Jajjaboo&oldid=25325" irraa kan fudhatame
Fuulli kun dhumarratti kan gulaalame guyyaa 24 Adooleessa 2014, sa'aa 10:48 irratti.